Dibana neCanva, inkqubo elula yoyilo emhlabeni | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Dibana neCanva, inkqubo elula yoyilo yehlabathi
UJose Angel | | Izixhobo zoYilo, Amaqhinga
Ngamanye amaxesha ujongano lweenkqubo ezinje ngefotoshop zinokusenza sibheke ezantsi. Ukujonga nje umxholo wayo kunye neendidi ngeendidi zeethebhu ezibandakanya oko, tide. Konke oku kongezwe kwiindleko zesicelo, ufakelo, njl. Yenza umhlaba phakathi kwesiqalo nesiqu sakho.
Kulapho siqala khona ukukhangela ezinye iindlela, uyilo oluchazwe kwangaphambili olungasebenzi kakuhle. Imibala, iimilo kunye neengxaki ezininzi esizibona kuyo yonke indawo. Ewe kunjalo, ukuba singabathandi nje abatsha okanye sintsha kweli hlabathi, asilindelanga ezinye iindlela ezininzi. Ngaloo mfuno, u-Canva uzalwe.
I-Canva sisixhobo sewebhu esenziwe yoyilo Isebenza njengomphathi womxholo. Ingaba ithetha ntoni? Iseka uluhlu olukhulu loyilo oluchazwe kwangaphambili kukhetho lomntu wonke kunye nazo zonke iintlobo zemisebenzi. Unokwenza nantoni na. Kodwa ayizolwakhiwo olwenziwe kuphela, kodwa unokuyiqala into yakho ukuqala ngemilinganiselo oyifunayo. Konke oku kongezwe kwinani elikhulu lezinto esele zifikelele kwizigidi ezi-3 zendalo ezenziwe. Into ehlala isongeza ukuzithemba xa ufaka i-portal entsha nengaziwayo.
Sebenzisa ukuyila kwakhona iibhloko zakho zeYouTube, Facebook, Twitter ... Fumana iflaya yamaqela akho aphambili okanye wenze eyakho imagazini yefashoni. Konke oku kufundisayo kunye nokunye, canva. Ngayo yonke uyilo, ifuna ubuchule, ifuna ukuba ungasweli nto.
1 Uqala njani
2 Ithala leencwadi elipheleleyo
3 Yenza elakho iqela
Okokuqala, kukho isifundo esingazukubi ukuba usiphonononge, nokuba asikho ngeSpanish.Kukho iividiyo ezihamba nazo eziza kukubonisa ukuba ufumane umbono wokuba ungaqala njani ngendalo yakho . Apha ngezantsi ungafumana iqhosha elithi 'Funa ukuphefumlelwa'. Ngayo uya kuba nakho ukubona zonke uyilo esele zenziwe kwi-Canva ngabanye abasebenzisi boluntu.
Ithala leencwadi elipheleleyo
Enye yezona zinto zibalulekileyo kwilayibrari yayo. Izinto, isicatshulwa, imvelaphi yazo zonke iintlobo ziyafumaneka ngomsebenzi wakho. Ukuba ufuna into, kufuneka uyithathe. Indlela oza kusondela ngayo kwiprojekthi yakho, ukuba ufuna imifanekiso emibini, ukuba uyayifuna ngokuthe nkqo, ngokuthe tye. Enye incinci kunye enkulu. Ungayisombulula yonke loo nto ngonqakrazo olunye.
Xa ugqiba umsebenzi wakho, ayihlali apho kuphela, inokuba lilifu lakho elitsha kuzo zonke iiprojekthi eziqhubekayo, unokukhuphela kwaye kunjalo, wabelane. Kodwa unokucima ukuze kungabikho nto ihleli apho ekukhathazayo. Kukho umgqomo wokurisayikilisha apho uzakuthumela khona iiprojekthi apho ungonelisekanga khona, kodwa khumbula, kuya kufuneka uzisuse emgqomeni ukuze zingayiqokeleli!
Yenza elakho iqela
Inqaku elitsha ngamaqela asebenzayo, ukuya kuthi ga kumalungu alishumi. Nge-imeyile ungamema abahlobo abalishumi okanye abantu osebenza nabo ukuba babelane ngokukhawuleza ngazo zonke izinto ozenzileyo ozenzileyo. Ke, ukuba yiprojekthi edibeneyo, wonke umntu unokuyibona, ayihlele kwaye abelane ngayo, ukuba kukho imfuneko kunxibelelwano lwasentlalweni.
Njengoko siqhele, akukho nto isimahla. Kwaye i-canva ayikho ngaphandle. Oko akuthethi ukuba ukufikelela kuyo kuya kufuneka uhlawule, yonke into ekuxoxwe ngayo ukuza kuthi ga ngoku ayihlawulelwanga kwaphela- ayizizo iindaba ezimbi kwaphela, kodwa ukuza kuthi ga apha ewe. Unokwenza uphawu ngaphakathi kweqela lakho, apho uluntu luya kukuqonda ngonqakrazo kwaye lwazi malunga nawe.
Unokwenza ubungakanani kwakhona bemisebenzi yakho bube ugqibile ngokusetyenziswa okwahlukileyo ofuna ukukunika. Lungiselela yonke loo 'hubbub' yoyilo ngeefolda wena neqela lakho. Konke oko kungenxa yokubhaliselwa kwenyanga eyi-12. Kodwa oko akuyimfuneko ngokupheleleyo ngaphandle kokuba uqale ukuyisebenzisa ngendlela yobungcali.
Akukho sixhobo sigqibeleleyo, kucacile. Kodwa i-canva isimahla, iyalawuleka, kulula kwaye iqulethe izixhobo ezininzi. Konke oku kongezwe kwinto yokuba yiwebhu: Canva.com Benza isixhobo esiluncedo ngokwenene ukukusindisa nanini na kwaye ngendlela eyiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Dibana neCanva, inkqubo elula yoyilo yehlabathi
Uyenza njani elula kwaye imnandi ikhadi leKrisimesi ngeFotojet
Intengiso entle kaDaft Punk kunye neetro